UNurkovic uyisiza kakhulu iChiefs, kusho umqeqeshi wePirates, uZinnbauer - Impempe
UNurkovic uyisiza kakhulu iChiefs, kusho umqeqeshi wePirates, uZinnbauer
Umqeqeshi we-Orlando Pirates, uJosef Zinnbauer othi usaba uSamir Nurkovic kwiKaizer Chiefs
Cishe uzoqashwa ngeso lokhozi futhi zizomphelezela ngisho engathi usayoshobinga umgadli weKaizer Chiefs, uSamir Nurkovoc izitobha ze-Orlando Pirates njengoba umqeqeshi weBucs, uJosef Zinnbauer embalule njengoyena mdlali oyingozi kuMakhosi.
Lezi zinkunzi zaseSoweto zizokhiphama inkani emdlalweni weDStv Premiership e-Orlando Stadium ngoMgqibelo ngo 3.30 ntambama. UNurkovic wayengekho ngesikhathi iBhakaBhaka lizitamuzela kwiMpofana emidlalweni eyandulela owamanqamu kwiMTN8, iyishaya kulandelana ngo 2-0 nango 3-0.
Ubesalimele ngaleso sikhathi lo mgadli waseSerbia kanti manje usebuyile futhi usaqhubeka lapho ayegcine khona ngokuba wuhlupho. Ukubuya kwakhe kubonakala kuwenzile umehluko njengoba iqembu laqala lathola amawini.
Emdlalweni wakhe wokuqala ebuyile, washaya igoli lokuqala behlula AmaZulu FC ngo 2-0 eThekwini. Yingakho kungamangazi ukuthi uZinnbauer abone yena ezoba yisiphazamiso kwezakhe.
Kufanele ukuba uzozidonsa ngendlebe izitobha zakhe ngokuthi zingalinge zimlibale uKokota Piano, okuyisiteketiso asazitholela sona uNurkovic kuleli.
“Abadlali bayazi kwenzekani kwiKaizer Chiefs njengamanje, iyeza iyashoshela kithi. Abazange bayiqale kahle isizini kodwa manje sebeqalile ukuwola amaphuzu,” usho kanje lo mqeqeshi waseGermany emhlanganweni nezintatheli ngoLwesine.
“Siyazi baneqembu elihlangene futhi uNurkovic usebuyile, ungumdlali okwaziyo ukwenza izinto zenzeke. Neqembu labo nje lihle kakhulu ngakho ngeke kwenzeke ukuthi sivele sizicaphunele kalula nje amaphuzu amathathu.
“Kuzoliwa ngoba umdlalo omkhulu lona. Banomqeqeshi osenamava kule ligi kwazise usewine inqwaba yezindebe phambilini. Uyawazi umsebenzi wakhe,” kusho uZinnbauer.
Uthe yize bayiwina yomibili imilenze kwiMTN8, kulokhu kuzobe kuhluke kakhulu kwazise neChiefs seyingcono kunalokhu eyayiyikho ngoNovemba nyakenye.
“Sayiwina imidlalo emibili edlule kwiMTN8, kodwa sidlala umdlalo ohlukile kulokhu ngoba sizobe sibanga amaphuzu. Yibona ababhekiwe ukuthi banqobe njengoba baqeda endaweni yesibili kwiligi ngesizini edlule futhi badlala nakwi(CAF) Champions League.
“Siyakwazi okuzokwenzeka uma sike salala kulo mdlalo. Angijabule neze ngenani lamaphuzu esinawo. Kumele ngabe sinamaningi kunalawa.”
Previous Previous post: UMotsepe usukela inyoka isemgodini ngokufuna ukwengamela iCAF
Next Next post: Izinhlelo zokubuyisa uManyisa kulandela ukugunyazwa kokudayiswa kweTTM